Maraykanka Oo Soo Bandhigay Sawiro Muujinaya Cida Lahayd Masuuliyada Weeraradii Warshadaha Sucuudiga. – Heemaal News Network
“Xisbiyadii Waxay Noqdeen Tukaan Rag Leeyihiin Markaa Waa In la Furo Ururada.”Ex Wasiir Duur
Mareykanka ayaa soo bandhigay sawiro lagu qaaday dayax gacmeedyada oo lala wadaagay sirdoonka, sawiradaas oo culays ku kordhin doona eedaymahii Maraykanku hore u jeediyay ee xusayay in Iran ay ka dambaysay weeraradii lagu qaaday Warashadaha saliida Sacuudiga.
Saraakiil aan la magacaabin oo Maraykan ah ayaa Warbaahinta Mareykanka iyo tan caalamiga ah u sheegay in jihada laga soo qaaday weerarka iyo heerka weeraradaas ee sareeyay ay shaki galinayaan in ay ku lug yeeshaan Jabhada Xuutiyiinta oo ay aaminsan yihiin in aysan weerar heerkaas ah qaadaan.
Wargayska New York Times ayaa ka soo xigtay Saraakiisha Ameerikanka in ay rumaysan yihiin in laga yaabo in weeraradan loo adeegsaday diyaarado Drone ah oo lagu rakibay gantaalado, walaw ay xuseen in taas aanay la micno ahayn in labada warshadood Abqaiq iyo Khurais si isku mid ah loo bartilmaameedayay.
Saraalkan ayaa intaas ku daray inay suuragaltahay in jihada weerarka laga soo qaaday ay tahay goobo ku yaal Waqooyiga Khaliijka, Iran ama Ciraaq.
Ciraaq ayaa beenisay wiiggii hore in weerarada laga soo qaaday dhulkeeda. Waxana uu Raiisel wasaare Adel Abdul Mahdi sheegay in Mr Pompeo uu kula xidhiidhay taleefanka maalintii Isniinta una xaqiijiyay mawqifkiisa, Mareykankuna uu taageeray sida ay Ciraq isaga fogaysay eedaha.
Warbaahinta ABC oo soo xiganaya sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegtay in Mr Trump uu si buuxda u aaminsan yahay in Iran ay mas’uul ka tahay weerarkaas.
Shiinaha iyo Midowga Yurub ayaa iyaguna si gooni gooni ah u sheeay in ay lagama maarmaan tahay in la xakameeyo.
Boqortooyada Ingiriiska ayaa Xoghayaheeda Arimaha Dibada Dominic Raab oo xiisadan ka hadlay ayaa sheegay inaysan wali cadeyn cidda mas’uul ka ah waxa uu ku tilmaamay “weerar xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah”
Iran ayaa eedahan iska fogaysay waxana ay ku tilmaantay hadalada Ameerikaaanka kuwo daandaansi ah, waxana xusid mudan in weeraradan ay 5% hoos u dhigteen sahayda saliida ee adduunka qiimaha sicirka shidaalkana kor u qaaday.
South Africa Oo Somalia Ka Reebtay Dalal Ay Uga Tacsiyay-nayso Dadkooda Lagu Laayay Dalkeeda.